GAAS oo soo jeediyey arrin xal u noqon karta loolanka Farmaajo iyo R/W Rooble | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA GAAS oo soo jeediyey arrin xal u noqon karta loolanka Farmaajo iyo...
GAAS oo soo jeediyey arrin xal u noqon karta loolanka Farmaajo iyo R/W Rooble
Waxaa sii xoogeystay khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Dhex-dhexaadin laga dhex waday labada mas’uul ayaa kusoo dhamaatay fashil, haddaba maxaa xal u noqon kara khilaafka Rooble iyo Farmaajo?
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in labada dhinac ay iskugu soo dhawaan karaan, islamarkaana xal u noqon karta khilaafkooda siyaasadeed in meesha laga saaro tallaabada wasiir xilka looga qaaday.
Gaas ayaa qaba in Rooble uu sameeyo isku shaandheyn, iyada oo wasiirka uu wasaarad u quudhsado u dhiibo wasaarad kale, si loo ilaaliyo is-dhinac saarka siyaasadeed ee xiisada kiciyey.
Sidoo kale waxa uu soo jeediyey in agaasimaha NISA loo magacaabo qof saddexaad, oo labada dhinac kalsoonidooda siin karaan, maadama xiisada ugu culus ka dhalatay gacan ku haynta booskaas muhiimka ah, oo Rooble sarkaal u magacaabay, halka Farmaajo-na u magacaabay sarkaale uu wato.
“Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaruhuna waxay kala magacaabeen labo qof waxaa habboon in la isku afgarto qof saddexaad oo aan labadaas midna ahayn,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaarihii hore.
Waxa kale oo la qabaa in labada dhinac ay isla qaatan in marnaba aan laga wada-hadli karin, xal banaanka ahna laga gaari karin baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil, oo ah halka ay ka bilaabatay xiisadu.
Qodobka uu ka dhashay muranka ugu weyn ayaa ahaa kiiska gabadha ka tirsaneyd Hay’adda Sirdoonka qaranka, walina wax xal ah looma helin, waxaana muhiim ah in baaritaan habboon lagu sameeyo sida lagu waayay gabadhaas oo ka tirsaneyd hay’adda Nabadsugida.
Si kastaba, Wada-hadalladii saacadaha badan qaatay ee xalay illaa shalay u socday madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble ayaa lagu kala tagay, ayada oo aysan wax natiijo ah oo kasoo baxay, sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Caasimada Online.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkeystay inuusan marnaba ogolaaneyn in kiiska Ikraan Tahliil Faarax lagu sameeyo baaritaan madax-banaan, oo ay baarto maxkamadda ciidamada qalabka sida, halka ra’iisul wasaare Rooble uu sheegay inuusan marnaba aqbaleyn in kiiskaas la daboolo oo gabadhaas iyo qoyskeeda aysan helin caddaalad.
Previous articleMadaxweyne Cabdiqaasim oo Farmaajo u diray farriin la xiriirta khilaafka Rooble
Next articleArrimaha xiga ee dhici kara kadib fashilka ku yimid wada-hadalkii Farmaajo iyo Rooble
Xaaskii Meles Zenawi maxaysan ugu xiisin madaxtooyada Itoobiya?
Oday 80 jir ah oo ka mid noqday Ardayda u fariisatay Imtixaanka fasalka 8-aad (Sawirro)
Wararkii ugu dambeeyey qarax is-maamiin ah oo ka dhacay Lafoole & Tiirada dhimashada…
MD Farmaajo iyo Kheyre oo cabsi xoogan ka qabo hal arin oo Xasan Sheekh looga guuleystay in ku dhacdo
DAAWO: Sida uu u dhacay Qaraxa Muqdisho iyo Dhimashada 23 qof kor u dhaaftay
XOG: Arrin soo laalaabata oo sabab u ahayd in qaraxii shalay lagu laayo saraakiil badan (Meel uu uga egyahay...
Sheikh Fu’aad Shoongale oo hal arrin ku baraarujiyay Shacabka Soomaaliyeed
SAWIRO: Taliyaha Ciidanka Booliska Oo Tababar U Furay Saraakiil Iyo Ciidamo.